U-Batman v Superman kaMartha Usengoyena Mlingisi weFilimu ubuthathaka - Iimuvi
Eyona Iimuvi UMartha uselona Khonkco libuthathaka 'likaBatman v Superman'
Batman v Superman: Ukuqala koBulungisa IWarner Bros. Imifanekiso
Kwiminyaka emihlanu eyadlulayo isihloko esigqithisileyo Batman v Superman: Ukuqala koBulungisa Ixhonywe kwizikrini ze-cineplex kangangeeyure ezingama-150 zokulwa okungacacanga, umculo odlamkileyo, umculo odibeneyo kunye noJese Eisenberg ngokuhlafuna indawo entle kangangoko. Ngo-2016, njengoko iphulo likaTrump lalixakekile, imovie yafundwa njengesibhengezo esisuka entliziyweni kodwa esidubulayo, kunye noHenry Cavill's Superman njengomphambukeli ongumphambukeli ozincama ngenxa yexabiso lokwenyani laseMelika. Akukho nto ishwankathele ukungxola okusuka entliziyweni ngaphezu kokuvalwa kweSuperman ebethiweyo ikhupha umntu obuthathaka kodwa onomdla, Uyamyeka abulale uMartha!
Njengoko abalandeli bemovie besazi, akukho namnye uMarta kwi-movie, kodwa zimbini. Ngomnqweno wakhe oqhelekileyo we-carbonated fannishness, umlawuli uZack Snyder wayexhome ifilimu yakhe kwinto yokuba umama kaSuperman kunye nomama kaBatman kwincwadi yemidlalo yamahlaya kwenzeka ukuba babe negama elifanayo nelingaziwayo. Ngokucacileyo uSnyder ubonakala enebhongo kakhulu ngaye ngokuqaphela uMartha noMartha ngaxeshanye, kwaye ujika ukuqondana ngokungathi kuyaphakamisa, kodwa kuyadandathekisa, umzekeliso wobumbano kunye nemida yomanyano.
UBatman v Superman ine, ngokuqinisekileyo, itoni yesakhiwo. Kodwa ukushwankathela, umgidi-gidi wobubi uLex Luthor (ngu-Eisenberg) usebenzise amajelo eendaba noluntu ukuba bangamthembi uSuperman. U-Luthor uqinisekisa uBatman (uBen Affleck) ngakumbi ukuba amandla amakhulu kunye nokungaqheleki kukaSuperman kumenza isoyikiso eluntwini. UBatman, aka Bruce Wayne, ubiza uSuperman into engaqhelekanga, ehlekisa ngesinxibo sakhe (esivela kwilifa lakhe lobuhlanga laseKryptonia) kwaye emhlekisa ngokuba ngumntu wangaphandle. Awuzange ube nguthixo, uyatshica. Awuzange ube yindoda. Ngabom okanye hayi, i-bile kaBatman iyangqinelana nokuchasana nabaphambukeli okujolise kwabo babizwa ngokuba ziimodeli ezincinci njengamaYuda kunye nabaseAsia, abadla ngokubonwa njengabantu abangenabuntu kwaye njengabantu ababuthathaka njengabafazi.
Umzekeliso kaZack Snyder malunga nokwamkelwa kunye nobugorha bobugorha buhlazo ngokukodwa kwiindlela ezininzi ezibalulekileyo.
I-Luthor ivumela uBatman ukuba abeke ezinye i-kryptonite, ezinokuthi zimenze buthathaka uSuperman. Emva koko ubambe umama kaSuperman, uMartha Kent, kwaye ufuna ukuba uSuperman abulale uBatman. Ke uBatman noSuperman batshayana ngeenxa zonke kwiscreen okwexeshana, de ikryptonite kaBatman imvumele ukuba aphumelele. Ngesandla sakhe emqaleni kaSuperman ulungiselela ukubhukuqa ngobabalo ngomkhonto we-kryptonite, kodwa uyanqumama xa uSuperman ekhamisa, Uyamyeka abulale uMartha!
UBatman uyaqina. Emva koko uLois Lane (Amy Adams) uyabonakala kwaye ucacisa ukuba uSuperman, aka Clark Kent, uthetha ngomama wakhe. Ifilimu isinika imifanekiso ebuyisa umva kamama kaBatman, okwabizwa ngokuba nguMartha, ebulawa ekuphangeni exhobileyo kwindlela eyayihamba ngexesha uBruce wayesengumntwana. Ekohlwaywa kwaye ngequbuliso eqonda ubuhlanga bakhe obungenangqondo, uBatman uthi, ndiza kukwenza isithembiso. UMartha akazukufa ngokuhlwanje.
iphikisiwe ezi mpikiswano. Abadali bakaSuperman uJerry Siegel noJoe Shuster babengengabo abenkolo okanye umdla kwi-lore yamaJuda. Imithombo yabo yeSuperman yayiyimpembelelo yesayensi kunye neentsomi, hayi iBhayibhile okanye intsomi yaseMpuma Yurophu.
Ukuba kukho nantoni na, ubuJuda bukaSuperman abukho kwiimpawu zobuhlanga okanye kwiibali zamabali, kodwa kukungabikho kwabo bamakishi. Abantwana ababini bamaJuda abavela eCleveland babecinga ukuba uClark Kent — inkolo yamaJuda e-nebbishy kwiinkalo ezininzi-eneneni yayiyeyona mifanekiso inamandla yamaMelika kunye namandla obudoda emhlabeni. Amabali okuqala awakhankanyi nelifa lemveli likaSuperman laseKryptonia. Endaweni yoko, uSuperman, njengamaYuda amaninzi aseMelika, wamkela inkqubo entsha yokuqhubela phambili, ehlasela abanini bam abonakeleyo kunye nongxowankulu egameni labasebenzi abamhlophe abanegazi elibomvu.
Nangona kungaxoxwa kangako, abadali bakaBatman uBob Kane (owazalwa nguRobert Kahn) noBill Finger (owazalwa nguMilton Finger) nabo babengamaJuda. NjengoSuperman, uBatman wayeza kulahla i-fotpishish-tinged foppish ye-Jewish fotpishish persona ukuze abe ngumthetho kunye nomyalelo we-bruiser wezobulungisa. UBatman noSuperman bobabini banomama ogama linguMartha kuba uMartha uqhelekile, nokuba ligama elibi, igama laseMelika, elingenanto yakwenza nobuhlanga. Kugxininisa imeko yesiqhelo yeqhawe.
Yinto engaqhelekanga yokuthatha isigqibo, nangona kunjalo, enxiba iithayithi ezimibalabala kwaye inxibe iindlebe ze-bat. Xa uBatman ehlangula uMartha Kent (uDiane Lane), umxelela ukuba ungumhlobo wonyana wakhe. Ndiqikelele ukuba uphendula ngokuchwayita. Ikapa. UBatman noSuperman abafani nje ngokuba benoomama abanegama elifanayo elingamangalisiyo. Bayafana kuba banxiba ngendlela egqibeleleyo.
UClark Kent noBruce Wayne abangamaYuda kwifilimu, kunjalo. Abangabaphambukeli kunye / okanye abantu bebala nokuba. Abona bantu bangengabo baseMelika kumdlalo bhanyabhanya babonakaliswa njengabanqolobi kunye nezigebenga. Umzekeliso kaSnyder malunga nokwamkelwa kunye nokuba nesibindi seqhawe kubonakala ukuba uneentloni ngeendlela ezininzi ezibalulekileyo. Umboniso bhanyabhanya usenokuba uthatha kancinci kancinci ngokuchasene nabangaphandle. Kodwa iyayenza ngendlela ebaliweyo ukuba ingazukuvela kwi-xenophobes eyiyo. USuperman ubalekela eMexico ukuze asindise intombazana emlilweni. Kodwa uSnyder akazange amvumele ukuba akhusele umntu ongenamaphepha e-US emapoliseni. Akukho mntu ukhe uthelekise unyango lukaSuperman kunyango lwabaphambukeli. Ngokucacileyo, uSnyder kunye neesuti eWarner Brother zange bafune ukwenza isikweko sikhombe.
Okwangoku, xa unikwe imvelaphi yomlinganiswa, kukho indawo ethile kumdlalo bhanyabhanya yokucinga ukuba xa uBatman eqonda ukuba ufana nqwa noSuperman, akaboni nje uSuperman njengomfo oqhelekileyo waseMelika. Mhlawumbi naye uzibona njengomntu wasemzini. NjengamaYuda aseMelika athe ziququzelelwe Ukuqhankqalaza ngokuchasene ne-ICE, ubumbano lungakhiwa kulwabiwo ngaphandle kokufana. Nokuba ku UBatman v Superman , ubulungisa abunyanzelekanga ukuba bugcinelwe abo banina ogama linguMartha.
Batman v Superman: Ukuqala koBulungisa iyafumaneka ukusasaza kwiHBO Max.
Njani 'iOrenji inguMnyama oMtsha' Wokulandela uQeqesho lweeNkwenkwezi zoQeqesho
Ngaba intle kakhulu ukuba ingadlala? UStephen Curry kunye noMbaleki oMnyama oKhanyayo
UFacebook Uchitha Ubuhlobo
Ividiyo yomculo yokuqala kwi-youtube
uhlala phi rob ephantsi
amantombazana e-gilmore ngonyaka kwifashoni yobomi
U-monica crowley yintoni i-bleep esandula ukwenzeka
Iifilimu zemichaela conlin kunye nemidlalo yeTV